Amanqanaba omgangatho kunye ne-GIS enezinto ezininzi
NgoDisemba, 2009 GIS asibonise, Topography
Ukuvavanya i-Manifold ye-GIS eyenziwa ngamamodeli edijithali, ndifumanisa ukuba i-toy iyenze ngaphezu koko esiyibonile kude kube lula ukuphathwa kwendawo. Ndiza kuwusebenzisa njengomzekelo umzekelo esiwudale ekusebenziseni ezitalato kunye neCandelo le-3D.
Ngenisa imodeli yedijithali
Kule Ncwadana inesibindi esinamandla, ungangenisa kwiifomati eziqhelekileyo ezigcina idatha yendawo, njenge-ESRI, ENVI, IDRISI, ERDAS, njl. Kwakhona nedatha equkethwe kwiifom zokwenza ezifana nedbf, csv, txt.
Kule meko, ndifuna ukungenisa i-.dem eyenziwe nge-AutoDesk Civil 3D; ngokuba ndiyenzayo:
Ifayile> yokungenisa> indawo
Kwaye yile nto, ndenze igalelo lendlela yokuphawula kunye neepropati zefayili yasekuqaleni, njenge-projection, inkqubo eyenziwe ngayo, njl njl. Xa ulungelelanisa iifayile, icela umyalelo apho bangeniswe khona kunye nohlobo lwenkcukacha yenombolo.
Ukuba ufuna ukusebenzisa idatha ngaphakathi kwecandelo, ukuguqula phezulu, wenza kuphela ikopi> unamathisele njengomhlaba
Ukudala imigca yenkalo, yenziwe:
Kwaye apha unokukhetha iirvebhe zomntu, okanye ukongeza, enye yokuqala ibekwe kwaye ngamnye uyongeza. Kule meko, ndiyigqiba i-191 kunye nokwanda kwe-1.
Unokukhetha kwakhona ukuba ufake iirveve zamanqanaba okanye ummandla phakathi kwabo, emva kokuba bemibala ngokuzenzekelayo, ukuphakama. Oku kudalwa njengoluhlobo lwenxalenye umzobo.
Yakha imbono ye3D
Ukwenza oku, ummandla wenziwa kunye nomntu obizwa ngokuba yi-subcomponent indawo, oku kungabonwa njengombono we-3D, kunye neqhosha lasekunene ukhethwa ukuba ufuna liweyo ukusuka kwezinye iindawo, umkhukula, ukuthungwa, ifayile kunye nokuphakamisa ukuphakama.
Ukufakela iphrofayili, yenziwe njengokuba iqela liza kwenziwa, ukhetha phezulu. Cela umgangatho wokuxhomekeka kwaye umgca unokuguqulwa ngokufaka izithako.
Akulunganga, ukuba sicinga ukuba le nxalenye yokwandiswa Izixhobo ezingaphezuluNjengalo naluphi na isixhobo theming GIS yayinqabile, elula ukudala iindawo, kodwa awe kakhulu elifutshane ngokwemiqathango ukuba nokusebenziseka kunye neminye imisebenzi kunye neziphumo. Ubuncinane ukwenza imboniselo ulwandiso kunye nenkululeko enkulu malini kum elungileyo, oko kuchaphazela izinto kungenisa (amathuba, iindawo amanzi equkuqela phakathi ezigoso) babumbe imfanelo umaleko, ngoko ukuhlaziya modeli kufuneka yenziwe kwakhona.
Post edlulileyo«Edlulileyo Umdlalo weFIFA ufike
Post Next Cofa, cofa, nqakrazaOkulandelayo "